Tonizia: Korontana nateraky ny fikasana hamono tena nataonà lehilahy iray tsy an’asa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2010 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, বাংলা, Français, македонски, 简体中文, 繁體中文, Português, 日本語, Ελληνικά, English
Toniziana iray tsy an'asa no nikasa handoro ny tenany ho fanehoana tsy fankasitrahana amin'ny tsy fahitàny asa, ka niteraka onjan-kerisetra tao an-toerana sy fanehoana firaisankina ombam-panohanana teo anivon'ny tambajotra sosialy.
Raha mbola tsy fantatra mazava izay niafaran'i Mohamed Bouazizi, 26 taona, avy ao Sidi Bouzid, faritra atsimon'i Tonizia, nopaingorin'ireo Toniziana mpampiasa aterineto ilay zava-nitranga mba hilazàna ny tsy fisian'ny asa, ny kolikoly sy ny fitsitontongan'ny zo maha-olona ao amin'ny firenen-dry zareo.
Hatrany anaty Facebook sy Twitter ary bilaogy, maneho ny firaisankinan-dry zareo amin'i Mohamed ireo mpampiasa aterineto, izy izay vao avy nahazo ny diplaomany tao amin'ny Anjerimanontolon'i Mahdia taona vitsy lasa izay, nefa tsy nety nahita asa. Mamelona irery ny ankohonany izy, nanapa-kevitra ny hitady fivelomana izy, ary niaraka tamin'ny fanohanan'ny fianakaviany dia nanomboka tamin'ny varotra voankazo sy anana teny amoron-dàlana ranamana. Kely dia kely no entin'ity raharaham-barotra ity ho azy, zara raha ampy hanao izay tsy hahamenatra ny fianakaviany. Saingy manaramaso eny foana ny manampahefana eo amin'ny tanàna ka matetika no màka ireo entany. Nambarany azy ireo hoe tsy safidiny velively ny zavatra ataony toy izao fa mba ho ezaka fitazonana aina fotsiny. Isaky ny mihetsika dia tratry ny fandraofana foana ny entany, tratry ny fanambaniana sy ompa izy ary nohazàina teny amin'ny faritry ny fiadidiana ny tanàna. Tamin'ny fotoana farany izay nitrangan'io, very fanantenana tanteraka eto amin'ity fiainana ity i Mohamed ka nanapa-kevitra ny handao azy mandrakizay. Noraràhany solika ny tenany ary narehiny.
Tao amin'ny Facebook, maro ireo vondrona natsangana hiampangàna ny zava-nitranga. Atoa Filoha, mandoro tena ny Toniziana (Ar) dia isan'ireny. 24 ora latsaka monja, efa nahasarika mpikambana 2.500 ilay vondrona, ary hatramin'ny anio dia efa maherin'ny 10.000 ny mpanohana. 24 ora latsaka monja, dia efa voasivan'ny manampahefana ihany koa ilay izy, izay nanakombona ny aterineto tamin'ny tàna-maheriny.
Indreto dikasari-na fàfana roa, ilay faharoa dia mampiseho izay hitan'ireo Toniziana rehefa manàndrana miditra amin'ilay pejy ry zareo:
Nanoratra mikasika ny zava-nitranga ny mpitoraka bilaogy sasany no sady naneho ny hatezerany. Voasoratra amin'ny tenim-paritra Toniziana, lahatsoratra iray nosoratan'i Boukachen nitondra ny lohateny hoe The Sidi Bouzid Holocaust (Ny sorona nataon'i Sidi Bouzid) :
Tsy zava-baovao ny nitranga. Io tranga mahonena io dia efa nisy foana tany amin'ny faritra lavitra tany ary efa an-taona maro. Io dia vokatry ny fifangaroan'ny toetrandro sy ny fanilikilihana ireny faritra ireny, niampy ny tsy firaharahàna tanteraka (nataon'ireo manampahefana). Saingy tsy hoe akory manao izay hampanginana io raharaha io ireo fampahalalam-baovaontsika dia hifarana eo ny tantara.
Tunisian Girl nanampy hoe:
Tsy nahita vahaolana hafa ny governemanta Toniziana afa-tsy ny nanivana ilay vohikala nanely ny tantara, ary dia nametraka sàkana ao an-tanànan-dry Sidi Bouzid, toerana izay idinan'ny olona eny an-dàlambe hanehoan-dry zareo ny hatezerany.
Ao amin'ny Twitter, mitohy hatrany koa ny haromontana, miaraka amin'ny tenifototra #sidibouzid trending among Tunisian users.
Soratra miverina: ;-) Развигор » Како започнала револуцијата во Тунис
[…] · Tonizia: Korontana nateraky ny fikasana hamono tena nataonà lehilahy iray tsy an’asa […]
05 Avrily 2011, 14:01